Maka: ukuhlanzeka kwedatha | Martech Zone
Maka: ukuhlanzeka kwedatha
Isikhathi Sokwenza Isikhathi Sentwasahlobo Sesu Lakho Lokumaketha
NgoLwesithathu, ngoMashi 21, 2018 NgoLwesine, Februwari 25, 2021 Douglas Karr
Njalo ngezikhathi ezithile, kubalulekile ukubuyekeza isu lakho lokumaketha. Ukuziphatha kwabathengi kuyashintsha ngokuhamba kwesikhathi, amasu esincintisana nawo akho ayashintsha ngokuhamba kwesikhathi, nezinkundla zokumaketha ezidijithali ziyashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Intwasahlobo isilapha, futhi manje yisikhathi esifanele semikhiqizo yokuvuselela imizamo yabo yokukhangisa yedijithali. Ngakho-ke, abathengisi bayisusa kanjani imfuhlumfuhlu kumasu abo wokumaketha? Ku-infographic entsha ye-MDG, abafundi bazofunda ukuthi imaphi amaqhinga amadala futhi akhathele edijithali okulahla lokhu
Ukulungiselela Idatha ye-Talend: Finyelela kalula, Hlanza futhi Lungiselela Idatha Yakho ye-CRM
ULwesihlanu, February 19, 2016 ULwesihlanu, February 19, 2016 Douglas Karr
Usanda kubuya kusuka esontweni eVegas usebenza ngenye imboni yokuhweba. Ukhathele, ubambekile ngokuphelele ku-imeyili nakwamanye amaphrojekthi, futhi unemikhumbi eminingi yokuhola edinga ukuqinisekiswa futhi ifakwe kuhlelo lwakho lweCRM. Ukugqolozela kuleso sipredishithi esikhulu samagama, uyazi ukuthi kuzokuthatha usuku lonke ukucubungula imininingwane yokuxhumana. Ukufaka ngesandla nokuhlanza idatha yakho kufana nokubuka upende womile — uyisidina okhathaza ingqondo futhi
Friday, February 19, 2016 Friday, February 19, 2016
Ukuhlukunyezwa Kwamanzi - I-Analogy Analogy Iya Ebhulohweni Kakhulu
NgoLwesithathu, Agasti 12, 2015 UJim Sterne
Idatha, njengamanzi, iza ngezindlela eziningi. Ingqondo yomuntu iguqukele ukuhlunga idatha eningi esiza ngayo ngoba kumane kuningi kakhulu kwayo. Uma uvula amehlo nezindlebe, idatha ikuyo yonke indawo. Umbala wodonga, umsindo we-air conditioning nephunga lekhofi lomakhelwane wakho kuphathwa njengomswakama. Amanzi asemoyeni ngaso sonke isikhathi kepha awasebenziseki
Ngifisa Ukuba Abakhangisi Bangayeka Ukusho Lokhu…
ULwesine, May 7, 2015 ULwesihlanu, February 2, 2018 Douglas Karr
Mina noJenn sivakashele indlunkulu yeGenesys kuleli sonto futhi sahlala phansi neqembu labo lokumaketha ngokwedijithali futhi omunye wemibuzo evelile kwaba ukuthi sike sabeka i-infographic ngemuva kokubhaliswa. Saphendula ngokushesha ukuthi asikaze sikwenze lokho ngaphambili. Ithimba le-Interactive lithe lenze isivivinyo nge-whitepaper ne-infographic kwathi u-0% wabhalisa waphinde walanda i-whitepaper kwathi i-100% yabhaliswa ukubuka
Thursday, May 7, 2015 Friday, February 2, 2018
NgoLwesithathu, ngoMashi 1, 2006 NgoLwesine, ngo-Okthoba 23, 2014 Douglas Karr
Ngibhalele ozakwethu namuhla ngigcizelela ukuthi ibaluleke kangakanani iNhlanzeko yeDatha emizamweni yakho yeCRM. Ithi, “Idatha Inhlanzeko iseduze Kokuhlonishwa Kwedatha” Uthi, “Lapho-ke ngizoba seDatha Heaven” Chuckle!
Wednesday, March 1, 2006 Thursday, October 23, 2014